Shiinaha 304 Maydh -biraha ahama dhigay warshad iyo saarayaasha | Leto
304 Shattaf Steel ahama
304 Qalabka qubeyska ahama
Qubayska gacanta ABS
Tayada Saabuunta Induction -ka ugu Fiican - Stainless S ...
Faahfaahinta Muhiimka ah:
1Model No. LT5734
qalabka musqusha oo qaali ah set qubays matte madow roobka dhigay set qasabadda qasabadda
Qubeyska qubeyska ayaa la dhigay, oo leh qeybaha oo dhan markaad qubeysaneyso. Iyada oo leh nolol tayo sare leh oo habboon!
Quality Qalabka Tayada Sare:Ka samaysan alaab naxaas ah oo saafiya ah, cadaadis sarreeya u adkaysta, horjoogsada korriinka bakteeriyada, ma wasakheeyaan ilaha biyaha, oo wuxuu isticmaalaa agabyo tayo sare leh si uu u bixiyo tayo iyo biyo tayo sare leh. Kordhi cimriga
● Shelf ku habboon:Shelfiga waxaa loo isticmaali karaa in lagu kaydiyo alaabta musqusha sida jel qubeyska iyo shaambo, taas oo ay fududahay in la nadiifiyo. Isticmaalka wax daawaha oo tayo sare leh, anti-gubashada, anti-gabowga, iska caabin ah daxalka iyo nolosha adeegga dheer
Shower Qubeyska badbaadada:oo leh quful amni oo caqli leh, heerkul joogto ah oo otomaatig ah oo ah 38 ℃ si looga hortago in heerkulka biyaha uu aad u sarreeyo. Waxay kaloo ka hortegi kartaa in carruurta iyo waayeelka lagu gubo biyo marka la isticmaalayo. Sii isticmaale kasta dareen qubays oo ammaan ah oo raaxo leh
Design Naqshad Casri ah:Dusha qubeyska waxay isticmaashaa rinjiga buufinta madow si ay u muujiso muuqaalka naqshadda casriga ah. Shelf leh walxo daawaha ah. Shaqo gacmeed oo keli ah iyo 10-inji oo qubeys sare ah. Tuubada qubeyska u adkaysta waa mid fudud oo dabacsan in la isticmaalo. Usha qubeyska oo la hagaajin karo si loo daboolo baahiyaha isticmaaleyaasha kala duwan
Service Adeegga iibka kadib:Inta lagu jiro muddada dammaanadda, haddii sheygu leeyahay wax dhibaatooyin tayo leh ama wax kale oo su'aalo ah, mar walba waad nala soo xiriiri kartaa. Waxaan joognaa adeeggaaga 24h
Shower Qubeyntani waxay qaadataa muuqaal naqshad casri ah, oo dusha sare waxay isticmaashaa rinjiga buufinta madow, kaas oo ah doorashadaada dhadhanka.
Rod Usha qubeyska ee qubayska qubayska ayaa lagu hagaajin karaa dhererka, sidaa darteed waxay ku habboon tahay baahiyaha noocyada jirka ee kala duwan.
● Laba ka mid ah nidaamka qubeyska, leexo buulka midig si aad u beddesho booska biyaha.
Ho Tuubada qubeyska lidka ku ah waxay ku xirnaan kartaa shower inji kasta oo isku xira jirka qubeyska, sidaa darteed waxay ku habboon tahay ku dhawaad ​​musqul kasta.
Shower Qubayska dusha sare wuxuu leeyahay shaqo lime lime ah, kaas oo bixin kara durdur roob oo aan fiicnayn oo raagaya.
Paint Rinjiga lagu buufiyo madow ee la xaqiijiyay waa daxalka u adkaysta, qurux iyo raagaya.
Ho Tuubada bir-birta ah ee dhererkeedu yahay 1.5m waa mid fudud oo dabacsan waxayna biyo gaarsiin kartaa inji kasta oo maqaarkaaga ah.
Magaca badeecada Nidaamka maydhashada Waxyaabaha 304 ahama
Cabbirka kartoonka 92*41*91 cm Miisaanka Sanduuqa 8 kg
Tirada kartoonka 7 kumbiyuutar OEM/ODM La aqbali karo
Midab Madow Dekedda Ningbo/Shanghai
Guri, Xafiis, Dugsi, Hotel, iwm.
Dhererka Rakibaadda: 178-210 cm
Miisaanka saafiga ah: 7000 g
Miisaanka guud: 7850 g
Baakadaha: Sanduuqa buniga ah ayaa la buuxiyey
Dekadda FOB: Ningbo, Shanghai,
Cabbirka kartoonka: 91.5*40.5*91 cm
Cutubyada Kartoonka Dhoofinta: 7 pcs
Miisaanka guud: 55 kg
Mugga: 0.337 m³
Waqtiga Hogaaminta: 7-30 maalmood
Hore: LED Maydho Hand
Xiga: 304 Shattaf Steel ahama
LED Maydho Hand
ABS burushka musqusha
Bixiyaha Waraaqda ABS
Tianfu Zhichuang Park, Wadada Chengbei, Yiwu, 322008, Zhejiang, Shiinaha